Been Abuurista Waajibaadka culus - Warshadda Macdanta Qingdao TianHua Yihe
Qingdao TianHua waxay bixisaa qaar ka mid ah caadooyinka ugu waaweyn iyo been abuur bir ah. Waxaan aqoon ballaaran u leenahay dhinac kasta oo been abuur culus ah iyo gaarsiinta guusha ee dhismayaal aan tiro lahayn oo adag iyo qaab dhismeedyo waaweyn sida golaha wasiirrada ee VFD, hawo-mareenka weyn, keydinta badan, maareynta maaddooyinka, qaababka culus, taangiyada, hoppers, iyo qeylada warshadaha oo ay ku jiraan korontada. , macdanta, saliida & gaaska, warshadaha, tamarta kale iyo qoraxda.
Qingdao TianHua waa shahaado la siiyay ISO 9001 & ISO 3834-2, hawl wadeenada alxanka waa la tababaray oo EN ISO 9606-1 ayaa shahaado leh. Iyada oo leh aqoon ballaadhan iyo waayo-aragnimo ku saabsan been-abuurka birta culus, SVEIFAB ayaa ku siin kara dhab ahaan waxaad raadineyso. Markii aan ka soo shaqeeynay shirkado kala duwan oo warshado kala duwan leh, waxaan aaminsanahay in awoodayada been abuurka birta ah ay yihiin kuwa ugu fiican ee la soo bandhigo.
Goynta - Goynta Laser & Goynta Ololka
Faa'iidooyinka goynta laser-ka ee goynta farsamada waxaa ka mid ah shaqeynta oo sahlan iyo faddaraynta shaqada. Sax ahaanta ayaa laga yaabaa inay ka fiicnaato, maadaama laydhka leysku aanu xidhnayn inta hawshu socoto. Waxa kale oo jirta fursad yar oo lagu xoqin karo waxyaalaha la jarayo, maaddaama nidaamyada leysku leeyihiin aag yar oo kuleylka saameeyay.
Goynta ololka ayaa ka jari kara dhumucda biraha xaashida ah illaa 100 inji walxaha. Habka loo maro dhumucda oo dhan waa isku mid taasna waa in maaddada ay tahay in “la kululeeyo” heerkul dhan 1,600-1,800 F darajo, ka dib marka Oxygen saafi ah lagu sii daayo aagga preheated ka dibna birta la okseysiiyo ama la gubo, sidaa darteed ereyga "Gubasho" Tayada dhamaadka goynta kama dambaysta ah waxay noqon kartaa mid aad u fiican oo leh cirifka sare ee fiiqan, dusha sare oo laba jibbaaran / fidsan, iyo gees hoose oo jilicsan oo aan lahayn xoqan.
Qingdao TianHua waxay leedahay hal set oo ah mashiinnada foorarsiga ah ee 'CNC' oo laga keenay DERATECH taas oo si gaar ah ugu laaban birta culus, Length ugu badan ee foorarsiga ah waa 6m iyo dhumucda ugu sarreysa oo la laaban karaa waa saxan bir ah 20mm.
Qingdao TianHua waa shahaado la siiyay ISO 9001 & ISO 3834-2, hawl wadeenada alxanka waa la tababaray oo EN ISO 9606-1 ayaa shahaado leh. Been abuur culus ayaa u baahan adeegsiga nooca saxda ah ee alxamida si loo hubiyo jiritaanka qaab dhismeedka. MIG, TIG, Oxy-Acetylene, alxanka qaansada iftiinka, iyo qaabab kale oo badan oo alxamid ah ayaa loo heli karaa si loogu amaano noocyada gaarka ah ee biraha iyo dhumucda aad u baahan doonto inaad soo saarto qalabka aad u baahan tahay. Alxanka ayaa bedelay qaabdhismeedka dhismayaal badan iyagoo siinaya aasaas ka adag kan rivet dhismayaasha. Ma aha oo kaliya in birta la adkeeyay ay ka badbaado badan tahay, sidoo kale waa mid wax ku ool ah.
Buuxinta baahiyaha deegaan wax soo saar sare leh, khadkeena daahan warshad shahaadeysan dhamaantood waa la cusbooneysiiyay dhowaan. Qingdao TianHua waxay awood u leedahay inay ku dabakho wixii daahan ah ee loo baahan yahay mid ka mid ah xarumaheena lagu daboolo kululaynta ayna ku dabaqdo nidaamka ka-hor-u-qabsiga ka hor inta aan la dahaadhin. Qarxinta xabbaddu waxay u diyaarisaa qaybo bir ah si loogu sii shaqeeyo sida rinjiga ama dahaadhka budada. Tallaabadani waa lagama maarmaan si loo hubiyo in jaakadu si sax ah ugu dhegto qaybta. Qarax toogasho ah wuxuu nadiifin karaa wasakhda sida wasakhda ama saliidda, wuxuu ka saari karaa oksaydhka biraha ah sida miridhku ama miisaanka wax lagu shiido, ama wuxuu dusha ka saari karaa dusha sare si uu u noqdo mid siman. Dahaarka budada, rinjiyeynta, sandblasting iyo beadblasting is iska leh, iyo galvanization waxaa lagu sameeyaa meesha ka baxsan iyadoo la isticmaalayo ganacsiyada maxalliga ah.
Awoodda Been Abuurista Waajibaadka culus
- Shahaadada EN ISO 3834-2
- Shahaadada ISO 9001
- Kormeeraha Alxanka AWS
- 6 Hawl-wadeenno alxamid oo sharciyeysan
- Afar koox alxanka
- 2 nooc oo ah 5 tan oo loo yaqaan 'rotator alxanka'
- 1 xarig xarig nadiifinta qiijinta sigaarka
- 1 gogol isku xidhka iyo alxanka oo leh 3 dabool